China Yakasiyana mota Kit Kugadzira uye Fekitori | LEEK
Yakasiyana Mota Kit
Tsanangudzo Item Zita: Yakasiyana mota Kit Kit: 650W / 800W / 1000W / 1500W / 2000W Mutongi: 15T / 18T / 24T / 30T / 36T Musiyano: Saizi inogona kuitwa sekukumbira Zvimwe Zvikamu: Yero Bhokisi, Throttle, Wiring Tambo, Chinja , nezvimwewo, zvinogona kuve zvekurongedza Kupakata Uye Kutakura Kupakata: CKD kurongedza uye inogona kurongedzwa sevatengi 'zvinodiwa zvemagetsi mota uye zvakapora zvikamu Kutumira: A. Nemhepo: vamwe vatengi vanoda kukurumidza kuburitsa. Zvirinani kutumira nemhepo, zvisinei nemidziyo iwe ...
Item Zita: Yakasiyana Mota Kit
Motokari: 650W / 800W / 1000W / 1500W / 2000W
Mutungamiriri: 15T / 18T / 24T / 30T / 36T
Kusiyanisa: Saizi inogona kuitwa maererano nechikumbiro
Zvimwe Zvikamu: Yero Bhokisi, Throttle, Wiring Tambo, Chinja, nezvimwewo, zvinogona kuita sarudzo
CKD kurongedza uye inogona kurongedzwa sevatengi 'zvinodiwa zvemagetsi mota uye zvimwe zvikamu
A. Nemhepo: vamwe vatengi vanoda kukurumidza kuburitsa. Zvirinani kutumira nemhepo, zvisinei nemidziyo kana zvigadzirwa zvakagadzirwa nenzira, ichave yakarongedzwa nebhokisi remabhokisi kana bhokisi remapuranga, asi nhumbi ichave yakakwira zvakanyanya.
B. Negungwa: nhumbi dzinozotakurwa mu 20ft mudziyo kana 40hq mudziyo kubva Tianjin, Shanghai, kana Ningbo chiteshi. Kubva kuTianjin port, nguva yekutumira inowanzo kureba, kutenderera mazuva makumi maviri nemakumi mana, asi mutengo wekutakura unenge wakaderera; kubva kuShanghai kana Ningbo port, nguva yekutumira ipfupi, asi mutengo wekutakura ndewepamusoro.
C. Nenzvimbo: kune dzimwe nyika, senge Thailand, Vietnam, Nepal, nezvimwewo, tinogona kutumira nepasi kubva kumaguta emuganhu.
Yako kubvunza ine chekuita nezvigadzirwa zvedu kana mitengo inopindurwa mumaawa makumi maviri nemana.
Vashandi vakanyatsodzidziswa uye vane ruzivo kuti vapindure kubvunza kwako kwese mukutaurirana kwakanaka.
3.OEM & ODM sevhisi, tinogona kubatsira iwe kugadzira maererano nechikumbiro chako.
4.Providing yakanakisa inodhura zvigadzirwa kune vatengi vane yakatsiga mhando uye yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi.
5.Sustainable mhando kuvandudza uye R & D mapurojekiti kusangana akasiyana ekushambadzira kudiwa.
6.Fast dhirivhari mukati memazuva gumi, inyore uye hupfumi mukati menyika kutakura kubva padyo chiteshi.
7.Flexible mubhadharo mazwi esarudzo, senge T / T, L / C, West Union, Mari-gramu, Paypal, Ali kubhadhara, nezvimwe.
Guangfeng Xiaoni Kutengesa IM. & EX. Co.Ltd bhizinesi repachivande, rine chiratidzo chakanyoreswa cheLEEK EV uye LUKE. Kambani yedu ine yakatanhamara tekinoroji timu, ine yedu pachedu kuvandudza uye dhizaini kugona. Via zvikamu zvekutsvagisa musika, isu takagadzira zvigadzirwa zvemakero akasiyana emusika zvigadzirwa.Zvedu zvigadzirwa zvakanyanyotumirwa kuSouth Asia.By izvozvi, isu tine matatu akateedzana:
1. Magetsi emagetsi emota yemutakura uye mutakurwi;
2. Spare zvikamu zvemagetsi tricycle;
4.Spare zvikamu zvemidhudhudhu;
5.Spare zvikamu zvemakomba.
Kuitira kuona quanlity nekutevera mwero wehurumende, isu tinozvivimba mune yedu mhando yezvigadzirwa. Kuburikidza nekuedza kwedu, zvinoratidzwa kuti chigadzirwa chedu chine basa rakavimbika mhando, uye chimiro chakanakisa. Panguva imwecheteyo edu akanaka masevhisi anozivikanwa nemutengi wedu. RUKA uye LEEK EV vatova vakakurumbira muindasitiri.
Pashure: Gear mota
Zvadaro: 18T mutungamiriri
Akatungamira Battery Charger
Mvura Bhatiri Chaja
Magnet Kuramba (Kutora)
Gear musiyano 33inch, 35inch, 37inch
Chitiviri Rickshaw Motor Kit
48V1000W 18T-24T Mutungamiriri
E Bhasikoro Kukanya, Chiedza Bhuruu Midhudhudhu, Rutivi Mira Puck, Yakanakisa Lithium Midhudhudhu Battery Chaja, 22.5 Mavhiri Evhiri, Kufambisa Pane Bhasikoro,